ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သူတို့အမြင်”
အခုလို ဆောင်းပါးများကို ဘာသာပြန် ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူး တင်မိပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်းပါးလေး ဖြစ်ပေါ်လာအောင် နောက်ကနေ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားကြတဲ့ မိတ်ဆွေများကိုလည်း ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။
ဒုတိယဆောင်းပါးမှာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အသံကို ပေါ်လွင်အောင် ပြောသွားတာမို့ အားရ ကျေနပ်မိပါတယ်ရှင်။
ကိုပေါရေ ဆောင်းပါးတွေ ဘာသာပြန် ဖော်ပြပေးတာ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ဒုတိယဆောင်းပါးလို မြင်လာနိုင်စေ ဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ကိုပေါ...ပထမဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး စလုံးလိုနိုင်ငံမှာ ( Oh..You "Myan Tiant" ah! Your country ah..so bad. You so lucky to be here you know ဆိုတဲ့လေလုံးတွေထဲ ) မြန်မာဖြစ်ရတာ ပထမဦှးဆုံးအကြိမ် ဂုဏ်ယူမိတယ်။ ပေးဆပ်ခဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။
တော်ပါသေးရဲ့- ဒါမျိုးလေး တွေ အော်ပေးလို့-
we need to be more vocal .
ဒီဆောင်းပါးတွေ ဖတ်လိုက်ရလို့ နည်းနည်းနေသာသလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုမြင်တဲ့ စလုံးတွေလဲ ရှိပါသေးလားနော်။
ဖတ်လို့ကောင်းပြီး ဗဟုသုတရဖွယ် အချက်တွေပါတဲ့ ဘာသာပြန် ဆောင်းပါးလေးပါပါ။
“မျိုးချစ်စိတ်ဟာ ငါမဆိုင်စိတ်ဓါတ်အကြားမှာ မရှင်သန်နိုင်”............ကိုးခံဘင်း (စထရိတ်စ်တိုင်းမ်စ်)
အဲ့ဒီ စာသားလေးကို အရမ်း သဘောကျပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သတိပြုသင့်တာက ကိုးခံဘင်း (စထရိတ်စ်တိုင်းမ်စ်)တောင် ဘာမှ မဖြစ်သေးတဲ့ သူ့နိုင်ငံအတွက် သူ့နိုင်ငံသားတွေ မျိုးချစ်စိတ် ထက်သန်စွာ ပါဝင်လာပါ့မလားဆိုပြီး စဉ်းစားစိုရိမ်နေသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံအပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ရွှေမြန်မာ အများစုဟာ ဒီလောက် ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဘာမှ မခံစားရသလို၊ ကိုယ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သလို နေနိုင်တာကို တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် အင်မတန် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
ကိုယ်က ဒီမှာ အဆင်ပြေနေလို့ ကိုယ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သလို နေ၊ နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်သိတတ်မှု ကင်းမဲ့ရာကျသလို၊ လူမပီသရာလည်း ရောက်ပါတယ်။
ပြည်ပရောက် ရွှေမြန်မာတွေ အနေနဲ့ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရောက်လာလာ၊ အချိန်တန်ရင် အားလုံးလိုလို ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်ကြမယ့် သူတွေပါ။
တစ်ချိန် ကိုယ့်နိုင်ငံ ကောင်းစားခဲ့ရင် ကိုယ်လည်း နိုင်ငံသားကောင်း ပီသစွာ တတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လှုပ်ရှားပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကို မိမိရဲ့ မျိုးဆက်တွေ ဂုဏ်ယူနိုင်ပါစေ။
ဒါကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ ၁၀၀ ၀၀၀ ၀န်းကျင် နဲ့ ပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေ အနေနဲ့ မိမ်ိတို့ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် မဆောင်ရွက်နိုင်ရင်တောင် ပြည်တွင်းမှာ လှုပ်ရှားသူတွေကို အထိရောက်နိုင်ဆုံး ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလည်းဆိုတာလောာက်တော့ သိကြမှာပါ။ အားလုံး အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် အပြည့်နဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် ၀ိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ကြရန် ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Keep it on, Ko Paw. The post is really effective. The post inspire us.
စထရိတ်တိုင်းမ ဆိုတော့လဲ Kor Kian Beng ကသိမ်သိမ်မွေ့ မွေ့ ရေးပြခဲ့ရတဲ့ကြားက မြန်မာမျိုးချစ်တွေရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ပြကြ ပုံကလေးက ပေါ်လွင်ပါပေတယ်။
နောက်တစ်ခါ Leong Sze Hian ဆောင်းပါးအဆုံးက
The violent suppression of dissent in Myanmar recently has evoked outrage in ASEAN and around the world. As ASEAN Chair, Singapore had to discharge its responsibility.
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျော့ခ်ျယိုး ရဲ့ပြောစကားလေးတွေကိုပြန်ဖော်ပြထားချက်နဲ့ အခု မြန်မာတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက်လုပ်ရပ် ကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင် အာဆီယံအဖွဲ့ အစည်း ဆိုတာ ဘာလဲသိသာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒိ Leong Sze Hian ရဲ့Payback time article ရဲ့commentတွေလဲ အချိန်ရရင် သွားဖတ်ကြစေချင်ပါတယ်။ စလုံးတွေသူတို့ အစိုးရအပေါ်သုံးသပ်ထားတဲ့ hypocrites ဆိုတဲ့စကားလေးတွေ့ လို့ ပြုံးမိသေးတယ်။
ဘာသာပြန်အတွက်ရော article links အတွက်ကျေးဇူးပဲဗျာ...
ကိုပေါရေ… ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ တွေ့ လိုက်ရတယ်…
အခုချိန်ထိ နောက်မဆုတ်ဘဲ ယုံကြည်ချက် အတွက်ဆက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ. သူများကို အထူးလေးစားပါတယ်ဗျာ...
နောက်တခုက အခြေအနေ ကေါင်းပြီထင်လို.၀င်ပြီး ခေါင်းဆောင်ရင်းနဲ. အခြေအနေ မဟန်လို.ခေါင်းရှောင်သွားတဲ.လူများ ကိုတော.လုံးဝ ရှူံ.ချလိုက်ပါတယ်.....
နောက်ပြီး ကိုယ် နဲ.မဆိုင် သလို နဲ. ကြံဖန်ပြီးတွေးကြောက်နေကြတဲ.တိုင်းပြည်ရဲ. ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးများ..ကိုတော.လုံးဝ ရွံရှာမိပါတယ်....
ဒီလို ကိုယ်.တာဝန်ကို မသိတဲ.သူတွေနဲ. နအဖ လန်ဖါးတွေ များနေသရ်ျ ကတော.စစ်အစိုးရ သက်တန်းရှည်နေအုံးမှာဘဲ.....
စကာံပူ အစိုးရရဲ. ဒီလိုဖြေရှင်းမှူ.ကလည်း ပြသနာ ကို ရှင်းမသွားတဲ. အပြင် ဒီထက် တက်ကြွပြီး လက်စောင်းထက်တဲ. မြန်မာ မျိူးချစ်တွေ ထပ်ပေါ်လာအုံးမယ်ဆိုတာပြောလိုက်ပါတယ်။။။
Thank you very much, Ko Paw, for the articles and the translations.
ကိုပေါ အတော်လေး အားစိုက်ထားပုံရတယ်။ ကျေးဇူးပါဗျာ။